Famakiana fitaratra fiara Norahonan’ilay jiolahy daroka hazo ireo mpisambotra azy
Tsikaritry ny tompona fiara iray ny famakiana fitaratra fiarakodia izay horobain’ny jiolahy ka niantso fokonolona izy.
Nanampy koa ireo manodidina tamin’ny fisamborana azy. Ireo olona nikasa nisambotra azy kosa anefa nambanany tamin’ilay hazo ka voatery niantso ny Polisin’ny CSP3 . Noentina hatao fanadihadiana avy hatrany eny amin’ny paositry ny Polisy ilay lehilahy iray , 52 taona monina ao Namontana Anosibe Antananarivo . Voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny boroboritany faha-telo ny 29 septambra teny Ankadivato izy io nohon’ny resaka famakiana fiara. Fiaraha-miasa amin’ny fokonolona sy ny fokontany no nahasamborana ity lehilahy ity ny 29 septambra 2019 lasa teo. Tratra niaraka amin’ny bolabolan-kazo na “bois rond” misy fantsika ity rangahy ity ary fiara niantsona an-tsisin-dalana teny Ankadivato no saika norobainy ny tao anatiny. Nahita faisana ireo fiara teny an-toerana tato ato.